Dictionnaire malgache et encyclopédie de Madagascar : /bins/ohabolana/atsimo
Proverbe 828 Aza atao hoe : may ity trano atsimo ka asa azy, fa voin-kava mahatratra. [Veyrières 1913 #1055, Rinara 1974 #402, Cousins 1871 #354]
Proverbe 1382 Aza miisa roa ohatra ny Tankady . [Rinara 1974 #776]
Aza miisa roa toy ny Tankady . [Veyrières 1913]
Aza misa roa toy ny Tankady . [Houlder 1895]
Miisa roa ohatra ny Tankady . [Rinara 1974]
Tsy mety raha miisa roa, ohatra ny Tankady , na sady ho ao atsimo no ho ao avaratra . [Rinara 1974]
Tsy mety raha miisa roa, toa Tankady . [Cousins 1871 #3466]
Proverbe 2147 Foy ho atsimon- trano, ka tsy foy ho andrefan-trano . [Veyrières 1913 #2854]
Tsy mety raha foy ho ao atsimon-trano ka tsy foy ho ao andrefan-trano . [Houlder 1895 #646]
Tsy mety raha foy ho atsimon-trano , ka tsy foy ho andrefan-trano . [Cousins 1871 #3413]
Proverbe 3395 Mamandrika akoho atsimon-trano , ka ny any tena ihany no voa ka maty , ka maka alahelo ho any ny tena . [Cousins 1871]
Proverbe 3729 Mandry atsimon' ny maty . [Veyrières 1913 #2522]
Proverbe 4010 Mby amin' ny andry atsimo . [Veyrières 1913 #6573]
Proverbe 4199 Miisa roa ohatra ny fatin-jaza , sady ao atsimon- trano no am--pasan- -drazana . [Rinara 1974]
Misa roa, toa fatin-jaza : sady atsimon- trano no am--pasan- -drazana . [Veyrières 1913 #377]
Misa roa, toa fatin-jaza : sady atsimo trano no am--pasan- -drazana . [Cousins 1871 #1823]
Nahoana no dia misa roa toa fatinjaza : sady ao atsimon-trano no am--pasan- -drazana ? [Houlder 1895 #2131]
Proverbe 5591 Ny toerana no tsy lavorary dia ny trano atsimo sy avaratra no mifanaraby . [Rinara 1974 #3300]
Ny toerana no tsy lavorary , ny trano atsimo sy avaratra no mifanaratsy . [Houlder 1895 #339, Veyrières 1913 #3503]
Proverbe 7000 Tenin’ aina , tahaka ny salakan’ Atsimon-drova . [Cousins 1871 #3078]
Proverbe 7353 Trano atsimo sy avaratra: izay tsy mahalena ialofana . [Cousins 1871 #3266]
Trano atsimo sy avaratra ka izay tsy mahalena hialofana . [Rinara 1974, Rajemisa 1985]
Trano atsimo sy avaratra : ka izay tsy mahalena ialofana . [Houlder 1895 #268]
Proverbe 7525 Tsy mahalala atsimo sy avaratra intsony. [Veyrières 1913 #2828]